Kedu ihe dị ọhụrụ na Google: Pixelbook, Pixel 2 na ọtụtụ ndị ọzọ | Akụkọ akụrụngwa
Lọ ọrụ a Adịla Ọjọọ na-adịwanye ka Apple. N'ịgbalị ịchekwa oge niile iji mepụta ngwaike nke ngwa nke aka anyị, taa anyị na-ahụ nzọ dị mma na ngalaba niile nke ahịa eletrọniki na ndị ahịa.
Nke a bụ otu Google si gosi Pixelbook, Pixel 2 na ụfọdụ ngwaọrụ ndị ọzọ n'ebumnuche nke ijikọ ahịa kachasị elu ma mepụta otu ntọala nke ndị ọrụ na-atụkwasịghị Google obi maka sọftụwia ya na - akwụghị ụgwọ. Ka anyị matakwuo nke ọma ihe Google nwere inye anyị. ,
2 Google Pixel 2 iji merie ahia
3 Home Mini bụ onye enyemaka gị
Anyị na-amalite na laptọọpụ ma ọ bụ kama kọnvatịbụl nke Google gosipụtara. N'ezie, anyị na-eche ihu ihu igwe nwere ike ịgbanwe nke na-achọ ịkwaga ntakịrị site na ihe PC mara mma nwere ike ịnye anyị. Nke ukwuu nke mere na anyị na-ahụ onwe anyị n'ihu a na ihuenyo nke 12,9 sentimita asatọ na 360 swivel ikikeº, O doro anya na tupu atụmatụ a anyị na-aga ịchọta otu aka. Na nkenke, anyị ga - ahọrọ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ PC ma ọ bụ mbadamba. Maka nke a, ọ ga-esonyere ya na mkpịsị akwụkwọ nke onye ọrụ ya ka ga-ahụ, mana nke ga-emerịrị.
Samsung a na-agbanwe agbanwe na-abịa na ụfọdụ karịa njirimara na-adọrọ mmasị, anyị ga-ahọrọ n'etiti Intel i5 ma ọ bụ i7 processors, ikekwe oke ike na oriri maka mbadamba nkume ọzọ, ọ bụ ezie na anyị chere na ha ga-enwe atụmatụ a nke ọma. Dị mkpa ma ọ dịkarịa ala ịkwaga mkpebi ahụ QuadHD nke na-enye ya panel.
Ikike nke ebe nchekwa RAM dị n'otu na 16 GB ma na nchekwa anyị ga-agbagharị n'etiti 128 na 512 GB nke diski SSD dabere na mkpa anyị na ikike akụ na ụba anyị. N'ihe banyere ihe, aluminom na uzo di obere ka o merie. Laptọọpụ ahụ ga-amalite site na € 1.199 na Spain, na-enweghị ụbọchị nnabata a kwadoro, nke a ga-atụkwasị ya na-erughị € 90 maka pensụl mara mma. N'ihe gbasara nnwere onwe, Google na-ekwe nkwa iji awa 10, yana ọdụ ụgbọ USB-C abụọ yana sistemụ arụmọrụ dabere na Chrome OS.
Google Pixel 2 iji merie ahia
Kedu otu ọ ga - esi bụrụ nke ọzọ, Google na - esonyere omume nke ihu FullVision na ebe nchekwa doro anya nke anyị nwere na LG G6. N'ezie, anyị nwere ike iche na ụlọ ọrụ South Korea nwere ihe jikọrọ ya na imepụta ihe. Na ọkọlọtọ ya ọ ga-esonyere ya na nhazi Qualcomm Snapdragon 835 na 4 GB nke Ram, nwere nkọwa yiri nke ahụ na mbipute Pixel XL 2.
Ha anaghị eyiri na ihuenyo, ụdị nkịtị na-enye ihuenyo OLED na mkpebi FullHD mgbe ụdị XL na-aga na panel QHD. Ihe dị iche na nha sitere na sentimita 5 maka nke nta ruo 6 sentimita asatọ maka nnukwu. Abụọ na okpukpu abụọ igwefoto azụ na usoro OIS onye enwetala akara nke 98 na DxOMark, nke kacha mma na ahịa ruo ugbu a. Batrị ahụ bụkwa ihe dị iche, n'etiti 2.700 mAh na 3.500 mAh nkeji abụọ na-agba egwu. Ihe niile. Bluetooth 5.0, akara mkpisiaka, mmiri na-eguzogide, njikọ USB-C, eSIM na okwu okwu stereo.
Ọnụahịa ndị a na-ekwenyebeghị, ga-eru € 1.000 nke ndị na-asọmpi ya n'enweghị obi abụọ, zubere maka ọnwa ole na ole sochirinụ.
Home Mini bụ onye enyemaka gị
Ihe dị ọhụrụ na Google: Pixelbook, Pixel 2 na ndị ọzọyana ezigbo ọkà okwu nwere ike inye ụda 360 Celsius. Ọ ka ga-ahụ etu esi arụ na gburugburu ebe obibi, mana na ọnụahịa ahụ ọ ga - abụ ihe a na - apụghị iguzogide ya na agba ya atọ, ojii, ọcha na ọbara ọbara. Obi abụọ adịghị ya na obere ọkà okwu na n'aka nke ọzọ ga-enwe ọtụtụ ihe iji gosi ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ime ka o doo anya na ọ nwere ike bụrụ ihe ọzọ na ihe Samsung na Apple na-atụ aro anyị na ngwaahịa ha nke omimi miri emi. Ihe doro anya bụ na € 50 ọ ga-abụ ihe ọzọ a họọrọ maka ọtụtụ n'ime ha, ndị ọzọ ga-anọgide na-ahụ ma anyị ga-agwa gị banyere ya. Anyi echefughi Pixel Earbuds, ekweisi ikuku na ntughari ozigbo na Google Assistant.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ihe omume » Ihe dị ọhụrụ na Google: Pixelbook, Pixel 2 na ndị ọzọ
Western Digital na-ere draịvụ ike yana 14 TB nke nchekwa